14 Beerta - Ku soo dhowow Nederland
Ilaa iyo hadda waxyaalaha Nederland dhoofiso waxaa ugu muhiimsan waxyaalaha beeraha ka soo baxa. Marka Maraykanka iyo Faransiiska laga reebo Nederland waa waddanka saddexaad ee adduunka ee dhoofiya waxyaalaha beeraha ka soo baxa ee ugu badan. Qaybo waaweyn oo Westland ka tirsan (waa gobollada Delft/ Den Haag) waxaa ku yaal beero muraayad ku hoos jira. Halkan waxaa lagu beeraa tamaandho iyo komkomer badan. Waxaa kaloo Nederland caan ku tahay beerida ubaxyada. 2.3 malyuun oo higtar ayaa Nederland beeraha lagu beeraa.
Nederland waxay weligeed caan ku ahayd lo'deeda. Lo' nus-malyuun ku dhow ayaa Nederland ku nool. Inkastoo ay sannad kasta tirada lo'daasi in yar hoos u dhacayso, haddana soo saaritaanka caanuhu wuu sii bataa. 1950-kii halkii sac wuxuu soo saari jirey 3500 litir oo caano ah sannadkiiba. Sannadkii 2000 waxay tiradaasi cagacagaynaysay 7000 oo litir sannadkiiba, taasoo u dhiganta 23! Lo'da ugu badani waxay ku nooshahay gobolka Friesland. Gaar ahaan saca ka yimaada gobolkaa ayaa adduunka aad caan uga ah. Dad badan oo reer Nederland ah ayaa aaminsan in dhulku ku yar yahay. Waxay kaloo aaminsan yihiin inay dawladu sharciyo badan madaxa ka saarto, sidaa daraadeed beeraley badan ayaa u guura waddamo ay kamid yihiin Kanada, Denmark iyo Jarmarka.
Xoolaha kale ee la dhaqdo
Tirada doofaaradu waa (12 malyuun), idahuna (1,2 malyuun) tiradaasoo kor u sii kacaysa. Laakiinse waxaa gaar ahaan aad kor ugu sii kacaya tirada dadka riyaha dhaqda. Berigii hore lama dhaqan jirin, laakiinse hadda riyaha Nederland ku nool waxay gaadhayaan 355.000. Waxaa kaloo aad loo dhaqdaa digaaga, oo gaadhaya 1 bilyan. Doofaarada iyo idaha waxaa loo dhaqdaa hilibkooda, riyahana caanahooda. Badanaa farmaajo ayaa laga dhigaa. Digaagana waxaa loo dhaqdaa hilibkiisa iyo ukuntiisa.
Kaluumaysiga Nederland wakhti adag ayaa la soo dersey. Sharciyo adadag ayaa kaluumaysatadii lagu soo rogey, waayo badda Noordzee aad baa looga kaluumaystay. Isu-tagga Yurub ayaa gooyey tirada kaluunka ah ee waddan kastaa baddaa kala bixi karo. Taasoo macnaheedu yahay inaad kaluun la xadiday sannadkii soo jilaaban karto. Haddii aad intii laguugu talo galay jilaabato, sannadka intiisa kale waxba ma jilaaban kartid. Tan waxaa loo samaynayaa si aan kaluunka badda looga dhammaysan. Tuulooyinka Nederland ee kalluunka aad caanka ugu ahi waxaa kamid ah Volendam Markem, Urk, Spakenburg iyo Katwijk oo badda ku taala. Qaar kamid ah meelahan dumarka ku nooli waxay weli xidhaan dharkii dhaqankii hore ee Nederland 'klederdracht'. Sidaa daraadeed dalxiisayaal badan ayaa meelahan yimaada.
Meesha geela lagu dhaqo
Dadka reer Nederland geel ma dhaqdaan, laakiinse waxaa jirta meel geela lagu dhaqo. Meeshan waxaa magaceeda la yidhaahdaa Berlicum, waxayna u dhowdahay Den Bosch. Ma jirto meel kaloo yurub ah oo geela sidan oo kale loogu dhaqo, iyadoo loogu talo galay in caano looga liso ay dadku iibsadaan. Meelo loogu talo galay ayaa caanahan lagu iibiyaa (Eeg bogga kale si aad u aragtid meelaha caanaha geela lagu iibiyo). Waa suurtogal inaad booqatid meeshan geela lagu dhaqo.